Ishe Charumbira Vonzi neVanhu Vakumbire Ruregerero
Mapato makuru anopikisa munyika, anosanganisa MDC-T, National People’s Party nemamwe masangano akazvimirira oga, apa Ishe Fortune Charumbira mazuva gumi ekuti vakumbire ruregerero panyaya yekuti madzishe anotsigira bato reZanu-PF uye mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, musarudzo dzegore rinouya kunova kutyora bumbiro remutemo.
Mapato nemasangano aya anoti Ishe Charumbira vakasadzosa mashoko avo aya vachakokorodza vanhu vemudunhu iri kuti varatidzire muguta uye kumusha kwavo kwaCharumbira kuNemamwa.
Mutauriri we NPP, VaJeffreson Chitando, vati VaCharumbira vakaramba kudzosa kana kuturura mashoka avo vachazvionera pamhuno sefodya.
Mutevedzeri wasachigaro we MDC-T muMasvingo, VaNoah Mutisi, vatsinhirawo mashoko aya.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano rinoona nezvemagariro evanhu kumaruwa, reCommunity Tolerance and Reconciliation Development, VaBrighton Ramusi, vatiwo vari kubatana nevamwe mukuratidzira.
Vachitaura neStudio7 neMuvhuro, Ishe Charumbira vakati vanhu havasi kunyatsonzwisisa zvavakataura.
Vesangano reMasvingo Human Rights vanoti nyaya yekupindira mune zvematongerwo enyika iri kuitwa naIshe Charumbira yave kupa kuti mamwe masabhuku amanikidze vanhu kuvapa nhamba dzemapepa avanenge vanyoresa kuvhota kana kuti ma serial numbers.
Vanopikisa ava vanoti vane pfungwa dzekuendesa Ishe Charumbira kumatare edzimhosva.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mashoko aIshe Charumbira anotyora chikamu chechimazana maviri nemakumi masere nechimwe, kana kuti Section 281, yebumbiro remutemo inorambidza madzishe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.